ကောင်းသောနေကြာချိုင့်နှင့်စက်ဘီးကျွန်း RayHaber | raillynews
22 / 10 / 2018 ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ
နေကြာချိုင့်နှင့်ဆိုင်ကယ်ကျွန်းနိုင်ငံတော်သမ္မတToçoğluဟုသူကဆိုသည် "ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းအဖြစ် camellias နှင့်ငါတို့နိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူအားကစား, ကဖေး, သားသမီးရဲ့ကစားဒေသများ, ကန်, ပျော်ပွဲစားဒေသများနှင့်ယခုနှစ်အသကျရှငျ 365 နေ့အဘို့အရေးပါတဲ့ဧရိယာဖြစ်ခြင်းအသက်ရှူသောလူသတ္တဝါတစ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်" ဖွင့်ပွဲမှာ Speaking; လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ Yavuz ပိုနေတဲ့အကြီးအစီမံကိန်းကို Sakarya ရရှိခဲ့သူကပြောပါတယ်။ အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးBalkanlıoğlu, "ဒီစက်ရုံနှင့်အတူ Sakarya ရဲ့အမည်ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးလိမျ့မညျ။ "
Sakarya တဲ့ Metropolitan Sunflower ချိုင့်နေတဲ့ခမ်းနားအခမ်းအနားနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ခဲ့သောမြူနီစီပယ်နှင့်စက်ဘီးကျွန်းgerçekleşirilကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်။ ဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်ကို Zeki Toçoğluအဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်အရွယ် Irfan Balkanlıoğlu, AK ပါတီလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌအလီ Ihsan Yavuz AK ပါတီလက်ထောက် Cigdem အာဒိုဂန် Atabeks, ကာဣနန် Sofuoglu, အ AK ပါတီပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ Fevzi ဓား, ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး, ခရိုင်အကြီးအကဲများ, SUB ပါမောက္ခချုပ်မှာမြို့တော်ဝန် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ နိုင်ငံသားများ၏ Mehmet Sarıbıyık, SESOB နိုင်ငံတော်သမ္မတ Hasan Alishan, Sakaryaspor ဥက္ကဋ္ဌ Cevat အချဉ်, လူငယ်နှင့်အားကစားဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒါရိုက်တာ Fatih Çelikel ASKF ဥက္ကဋ္ဌ Yasar အဓိကရပ်ရွာသူကြီးများနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာရာအရပျကိုယူ။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုစက်ဘီးနဲ့မော်တာပြပွဲနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ပရိသတ်ကိုမှအတွေ့အကြုံရှိစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်လေး၏သရုပ်ပြအဖွဲ့စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းမိမိအလေးမွတျဖျောပွထားသ; အောက်ပါအဖွင့် 200 စက်ဘီးအဆိုပါထီဆုရရှိသူမှဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။ Toçoğluသမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုပိုပြီးနိုင်ငံသားများမှ 300 စက်ဘီးလက်ဆောင်တွေထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တော်မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းAdapazarıမြို့တော်ဝန် Suleyman ဂီယာ, "ကျနော်တို့စက်ရုံဖွင့်လှစ်ရန်ယနေ့ကဒီမှာကိုစုဝေးစေကြပြီ။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန်ငါသည်ဤစီမံကိန်းတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူကိုလူတိုင်းအထူးသဖြင့် Zeki Toçoğluကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Adapazari ၌ဤစက်ရုံပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြူနီစီပယ်နှင့်အတူလက်၌အကြှနျုပျတို့၏လွှတ်တော်အမတ်များနှင့်လှပသောလက်, ကျနော်တို့စီမံကိန်းမစတင်နေကြသည်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့ဘုရားသခငျသညျလတ်အများအပြားပိုပြီးအဆောက်အဦ၏အဖွင့်ကိုမြင်ရပါတယ်။ "
နေကြာချိုင့်နှင့်ကျွန်းရဲ့စက်ဘီးကသူကျနော်တို့ပထမဆုံးနေ့ကတည်းကအားကစားဖို့အရေးကြီးပုံကိုပေး "ဥက္ကဋ္ဌ Zeki Toçoğluစတင်မင်္ဂလာဖြစ်စေလိုကြောင်း, ငါတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Sakarya ၏အားကစားမြို့အဖြစ်လူသိများခံရဖို့ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောအားကစားလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူသူ၏နာမကိုကြေညာဖို့ကွိုးစား။ ကျနော်တို့ Sakarya အားကစားသူ့ဟာသူ၏လယ်ပြင်ကိုအလေးပေးသော, ထိုလိုချင်; ငယ်ရွယ်ပြီးအသက်မည်သူမဆိုလွတ်လပ်စွာကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အချိန်ခွဲဝေချထားပေးရန်နိုင်ပါတယ်နေရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Sakarya ၏အားကစားမြို့တည်းဟူသောအားကစားအတူတူရောက်စေဖို့hemşehrilerimizin, အားကစားလှုပ်ရှားမှုများအတွက်သူတို့ကိုပိုပြီးအစွမ်းထက်အောင်ကျနော်တို့ပစ်မှတ်အဖြစ်ကိုယျ့ကိုယျကိုခန့်ထားပြီ။ ကျနော်တို့ဒြပ်ကွင်းအဆိုပါခရိုင်, အခြေခံအဆောက်အအုံအဆောက်အဦ, အားကစားနယ်ပယ်များတွင်တည်ဆောက်ထားကြသည်, ကျနော်တို့စက်ဘီးကျွန်းလူနေမှုစင်တာများသဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ဖွင့်လှစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့မွို့မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ငါတို့ကမ္ဘာသစ်ချန်ပီယံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမြတ်ဆုံးဆန္ဒ၏အောင်မြင်သောအားကစားသမားများ၏ဤအားကစားလယ်ကွင်းပေါ်ပေါက်ရေးတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလံသူတို့ရဲ့söyletipဝှေ့ယမ်း, ဇွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သီချင်းများ၏ရှေ့မှောက်၌လောကဓာတ်လုံးကိုရှိသည်ရန်လိုအပ်သည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံ၏အသစ်ကမ္ဘာနှင့်အိုလံပစ်ချန်ပီယံဤဒေသများကနေလာလိမ့်မည်ဟုငါတို့သိကြ၏ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧရိယာ၌ဤအားကစားသင်ယူဖို့။ "
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sakarya ကမ္ဘာ့ဖလားတောင်ဆိုင်ကယ်လူမျိုးကြီးမားတဲ့တာဝန်အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလို 2020 ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sakarya ၏အောက်ရှိကျင်းပလိမ့်မည်သောဤပြိုင်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့အဓိကကြိုးစားအားထုတ်မှုပါပဲ။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လက်ခံကျင့်သုံးစက်ဘီး, ငါတို့သည်လည်းကျယ်ပြန့်အသုံးပြုရန်လေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ကျနော်တို့စက်ဘီးလမ်းကြောင်းကိုပိုမိုအာကာသပေးဖို့စတင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်ဖွင့်လှစ်သွေးလွှတ်ကြောသက်တမ်းတိုးဖို့။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးစက်ဘီးအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ၌တည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူရကီရဲ့2။ ကျနော်တို့ကြီးတွေကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့များအောင်လျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ကျနော်တို့စက်ဘီးကျွန်းကိုတည်ဆောက်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏ထုတ်ကုန်အဖြစ်မြှို့နယ်ချမှတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးဘဝခိုင်ခံ့စေမြင့်မားဆန့်ကျင် "ဒီလူနဲ့သဘာဝတရား၏လေးစားမှု, ငါတို့သည်အနေကြာချိုင့်နှင့်ဆိုင်ကယ်ကျွန်းပေးပြီငါတို့မွို့အတွက်မြို့အားကစား၌ရှိသမျှသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပြန့်နှံ့ဖို့ရည်ရွယ်သောငါတို့စီမံခန့်ခွဲမှုချဉ်းကပ်မှုနှင့်အညီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံဧကအစိမ်းရောင်အာကာသ 180,3ထောတစ်ခွင်ရှိလူများ, အ5နှင့် 10 မီတာချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်နှင့်အားကစားဧရိယာနှင့်အတူခမ်းနားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘာဝလမ်းကြောင်းအတူ။ ကျနော်တို့မြို့စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးသူအရေးကြီးသော၏ကျယ်ပြန့်ယဉ်ကျေးမှု၏ကြီးထွားဖို့နျဆာပစျလိမျ့မညျ, များစွာသောအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူဤအင်္ဂါရပ်တည်ခင်းဧည်စေရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။ "
အဖြစ်ကောင်းစွာအားကစားများအတွက်အရေးပါသောဧရိယာဖြစ်ခြင်းအပြင် "Sunflower ချိုင့်နှင့်ဆိုင်ကယ်ကျွန်းကဖီး, ပျော်ပွဲစားဒေသများနှင့် camellias နှင့်ငါတို့နိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူယခုနှစ် 365 နေ့ကအသကျရှငျသားသမီးရဲ့ကစားဒေသများ, ကန်တစ်ဦးအလတ်စားဖြစ်သာယာသောအချိန်ဖြုန်းရှူနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးအပျော်တမ်းအဖြစ်ဤစက်ရုံ၏သင်တန်း၌အကြှနျုပျတို့၏လူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်အတော်များများလူငယ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ဘီးနဲ့စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်အတူဤနေရာတွင်ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုကိုက်ညီလိမ့်မည်ဟုစီမံကိန်းများကိုထုတ်လုပ်ရန် Sakarya ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်သင်နှင့်အတူသစ်ကိုနေရင်းဒေသများမိတ်ဆက်ပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့မြို့နှင့်ငါတို့တိုင်းပြည်, ငါတို့စက်ရုံရဲ့အကောင်းဆုံးအလိုရှိ၏။ ကျွန်မလာမယ့်အဘို့သင်တို့ရှိသမျှကျေးဇူးတင်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
လက်ထောက် Sofuoglu "ထိုကဲ့သို့သောစက်ရုံရှိသည်ဖို့ Sakarya ရဲ့တို့သည်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်း။ အားကစားသမားအဖြစ်အရမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့သမ္မတကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဒါဟာငါပြည်ပမှာလေ့ကျင့်ရေးလုပ်နေခဲ့သည်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 8 ။ ငါတူရကီအတွက်လေ့ကျင့်ရေးကိုပြုလိမ့်မည်တဲ့စက်ရုံမတှေ့နိုငျတယျ။ ငါသည်ငါ၏တိုင်းပြည်သည်ပြန်လာသောအခါငါ့အမိယခုငါသည်သင်တို့ကိုယှဉ်ပြိုင်နေကြကုန်အံ့တူရကီ၌မိမိတိုင်းပြည်သို့ပြန်လာ၏။ ငါရှိရာတူရကီအတွက်လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ဖို့မသိခဲ့ပါ။ ငါ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတ သွား. ငါခြေရာခံချင်တယ်။ ညာဘက်အစဉ်အကြှနျုပျလက်ရှိလေ့ကျင့်ရေးအဆောက်အကိုချိုးဖျက်ခဲ့သည်ခဲ့ပါဘူး။ ယနေ့ငါကဒီစက်ရုံကမ္ဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးတော်မူပြီမကြုံစဖူးမဟုတျကွောငျးကိုကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့ကဒီပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏တန်ဖိုးကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ မျှော်လင့်မကြာမီငါကဒီမှာလူငယ်များနှင့်အတူစက်ဘီးစီးချင်တယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကဒီမှာအလုပ်သမားများအသုံးပြုမှုကိုပြသပါ "ဟုသူကဆိုသည်။
ကံကောင်းသည် သာ. ကောင်း၏နှင့် get
လက်ထောက် Cigdem အာဒိုဂန် Atabeks, က Sunflower ချိုင့်နှင့်ဆိုင်ကယ်ကျွန်းစီမံကိန်းတွင်အကျိုးရှိသောဖြစ်စေလိုကြောင်း။ AK ပါတီလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌအလီ Ihsan Yavuz, "ငါငါကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကိုငယ်ကိုချစ်သူတို့အားဆွဲကိုမြင်တော်မူ၏။ ကျနော်တို့စီမံကိန်းကိုကြောက်မက်ဘွယ်ဘယ်လောက်သတိထားမိ။ ပါဝင်မှုအလွန်ကောင်းတဲ့ခဲ့သည်။ ငါဘယ်လောက်ကြွယ်ဝသောငါတို့စိတ်နှလုံးကို၏မြို့တော်မြို့တော်ဝန်အနီးကပ်သိရှိသူတဦးကိုမိပါတယ်။ ကျနော်တို့အရေးပါမှုအားကစားအားပေးပြီးမှသိရကြ၏။ ဤသူသည်ငါငါတို့မွို့မှမင်္ဂလာမင်္ဂလာဖြစ်ရန်ဆန္ဒရှိတဲ့အကြီးအစီမံကိန်းကိုဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
Balkanlıoğlu "အားကစားကလူကြံ့ခိုင်ရှိနေဆဲတစ်ဦးလှုပ်ရှားမှုအတွက်လိုအပ်သောအလွန်အားကောင်းတဲ့အတှေးအချေါ။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကအလွန်ကောင်းတဲ့စက်ရုံဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤလှပသောအပန်းဖြေကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏အဘို့မြို့တော်မြူနီစီပယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတ, သငျသညျအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားကစားလည်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာထိုကဲ့သို့သောလှပသောအဆောက်အရရှိမှုအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာနိုင်ငံတကာအားကစားပြိုင်ပွဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ 40 ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှအားကစားသမားကြိုဆိုပါတယ်။ အဆိုပါ 2020 အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံနှင့်ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်တွင်နေရာတစ်နေရာယူကြောင့် Sakarya ၌ဤစက်ရုံ၏နာမတော်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဖွင့်စက်ဘီးစီးဖြစ်ရပ်လွန်းပါးလွှာစဉ်းစားသည်ပေးတော်မူလိမ့်မည်။ ငါတို့သားသမီးတစ်ဦးအမှတ်ရစရာအထိမ်းအမှတအဘို့, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
ဒုတိယအချက်က Metro လိုင်းများ၏ Anatolian ခြမ်း Cekmekoy တိုးချဲ့
Manisa ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးထိန်းချုပ်မှုများ Continues
၁၉၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ Tevhid-i Efkârသတင်းစာသို့